ဖေဖော်ဝါရီလတစ်လလုံး တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ စမိုင်းလ် – Cele Lover
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်ကိုတော့ အားလုံးလည်း သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ သူမကိုတော့ အလှူအတန်းတွေ အရမ်းလုပ်ပြီး ခင်ပွန်းကလည်း အသည်းတုန်မတတ် ချစ်တာကြောင့် မိန်းကလေးအများစုက အားကျနေကြတာပါနော်။ သူတို့ရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေကိုကြည့်ပြီး အံ့ဩနေကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်နော်။
ဘယ်လို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့် အခုလို ချမ်းသာလာတာလည်းလို့ အများစုက မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။ စမိုင်းလ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်က လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး ပြည်ပနိုင်ငံတွင် အခြေချနေထိုင်ကာ နှစ်ယောက်အတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာကြောင့် အခုလိုချမ်းသာလာတာလို့ သူမရဲ့ အကောင့်မှာ ရေးသားထားဖူးပါတယ်။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးက အမေစုကို ချစ်ခင်ကြပြီး ICJ အထိတောင် သွားရောက် ဝန်းရံခဲ့ကြတာပါ။
အခုလက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း အစပိုင်းတွင် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပြီး မတ်လပိုင်းမှာတော့ ဘာလှုပ်ရှားမှုများမှ မတွေ့ရတော့ပါ။ သူမကိုတော့ အခွန်တိမ်းရှောင်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးခြင်း၊လက်နက်မောင်ခိုပြုလုပ်ခြင်း၊ OIC မှ …. ဒေါ်လာ ၅ သန်းအားစမိုင်းလ်းရဲ့ခင်ပွန်း ပြည့်မောင် မှ LA တွင် ရယူထားခြင်းတွေ့ရှိကြောင်း လိုင်းပေါ်တွင် ပြန့်နေပေမယ့်လည်း ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စမိုင်းလ်ဘက်မှ ဘာတုံ့ပြန်မှုမှတော့ မရှိသေးပါဘူး။
ေဖေဖာ္ဝါရီလတစ္လလုံး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနတာေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရတဲ့ စမိုင္းလ္
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ စမိုင္းလ္ကိုေတာ့ အားလုံးလည္း သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ သူမကိုေတာ့ အလႉအတန္းေတြ အရမ္းလုပ္ၿပီး ခင္ပြန္းကလည္း အသည္းတုန္မတတ္ ခ်စ္တာေၾကာင့္ မိန္းကေလးအမ်ားစုက အားက်ေနၾကတာပါေနာ္။ သူတို႔ရဲ႕ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈေတြကိုၾကည့္ၿပီး အံ့ဩေနၾကသူေတြလည္း ရွိပါတယ္ေနာ္။
ဘယ္လို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ အခုလို ခ်မ္းသာလာတာလည္းလို႔ အမ်ားစုက ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါတယ္။ စမိုင္းလ္ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က လင္မယားႏွစ္ေယာက္လုံး ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ကာ ႏွစ္ေယာက္အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလိုခ်မ္းသာလာတာလို႔ သူမရဲ႕ အေကာင့္မွာ ေရးသားထားဖူးပါတယ္။ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္လုံးက အေမစုကို ခ်စ္ခင္ၾကၿပီး ICJ အထိေတာင္ သြားေရာက္ ဝန္းရံခဲ့ၾကတာပါ။
အခုလက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း အစပိုင္းတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္လပိုင္းမွာေတာ့ ဘာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ သူမကိုေတာ့ အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊လက္နက္ေမာင္ခိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ OIC မွ …. ေဒၚလာ ၅ သန္းအားစမိုင္းလ္းရဲ႕ခင္ပြန္း ျပည့္ေမာင္ မွ LA တြင္ ရယူထားျခင္းေတြ႕ရွိေၾကာင္း လိုင္းေပၚတြင္ ျပန႔္ေနေပမယ့္လည္း ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စမိုင္းလ္ဘက္မွ ဘာတုံ႔ျပန္မႈမွေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။
Previous Article ပိုင်တံခွန်အဖမ်းခံရတဲ့ အကြောင်းကို မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြော ပြလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မ ( အသံဖိုင်)
Next Article အနုပညာရှင်တွေအဖမ်းခံရအောင် သတင်းပေးနေတဲ့ဒလန်လို့ စွပ်စွဲနေကြတဲ့အပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ